Motors DC iibinta qiimo jaban
Noocyada Motors DC iyo Codsigooda
Noocyada DC Motor
Gawaarida DC-ga ayaa leh codsiyo fara badan xaga meerayaasha maanta iyo injineernimada. Laga soo bilaabo xirmooyinka korantada illaa gawaarida - Motors DC waa meelwalba. Si aad uhesho codsiyadan ballaaran ee kala duwan - noocyada kaladuwan ee matoorrada DC waxaa loo isticmaalaa iyadoo ku xiran arjiga.
Taxanaha Xiisaha Leh ee DC
Haddii ay dhacdo dhaawac isdaba-joog ah oo mashiinka DC-ga ah ama si fudud oo taxaddar leh oo loo yaqaan 'motor motor DC', dhammaan armature-ka hadda wuxuu marayaa hareeraha wareegga iyada oo ay ku xiran tahay taxane si loo wareejiyo armature. Mashiinka kicinta taxanaha hal waji waa mootada si weyn loo isticmaalay. Faa'iidooyinkeeda waxaa u sabab ah xawaareheeda sare, Xuddunta bilowga weyn, cabbirka yar, culeyska fudud, fudeyd ka xannibaadda, iyo kaladuwanaansho ballaaran oo khuseeya. Habka loo hagaajiyo xawaaraha, fudud oo fudud in la hirgeliyo. Gawaarida taxanaha ah ee DC, xawaaraha ayaa ku kala duwan culeyska.
Compound Excitation DC Mobilada
Astaamaha kicinta xarunta ee mootada DC-ga waxaa lagu heli karaa iyadoo la isku daro astaamaha hawlgalka ee labada shunt iyo taxanaha xiisaha leh ee DC. Kicinta boogta isku dhafan ee mootada DC waxay noqon kartaa laba nooc iyadoo kuxiran dabeecadda isku darka, Isku-darka isku-darka DC iyo mashiinka kaladuwan ee DC. Dhismooyinka xiisaha leh ee matoorrada DC waxay leeyihiin adeegsi adag oo badiyaa ayaa laga isticmaalaa maraakiibta, kuraasta baabuurta, Iyo kor u qaadida qalabka macdanta.
DC Gawaarida Xiisaha Leh ee DC
Gawaarida gaarka ah ee xiisaha leh iska leh DC DC, taas oo macnaheedu yahay in iskuullada xad dhaafka ah iyo xawaaraha darawalka ee matoorku ay yihiin matoorro gaar ah, oo xawaaraha xad dhaafka ah ayaa la siiyaa si gooni gooni ah, iyadoo aan loo eegeynin heerka hadda jira. Dabaylaha xad dhaafka ah iyo xawaaraha darawalka gaarka ah ee gawaarida xiisaha leh waxaa u kala horreeya laba quwadood. Awoodda gaarka ah ee maktabadda gaarka ah ee mootada xiisaha gaarka ah ayaa ka dhigeysa qalabka mid sii adkeeyay. Si kastaba ha noqotee, matoorkani wuxuu leeyahay gaadiid balaaran oo balaaran waxaana badanaa lagu isticmaalaa jiidista mashiinka weyn.
Joogtada Magnet DC Mobilada
Motoriyeyaasha joogtada ah ee loo yaqaan 'magnet DC' matoorrada joogtada ah waxaa loo qaybin karaa matoorrada DC ee aan fiicnayn iyo matoorrada joogtada ah ee burcadda leh ee burushka DC ama aan lahayn burush. Matoorrada joogtada ah ee magnet DC-ka ayaa si aad ah loogu isticmaalaa waxyaabo kala duwan aaladaha elektiroonigga ah ee la qaadan karo ama aaladda, sida duubista, Ciyaaraha VCD, Ciyaartoyda duubista, mashiinada korantada, iyo alaabo kala duwan, sidoo kale waxaa si weyn loogu isticmaalaa gawaarida, mootooyinka, qallajiyeyaasha gacanta, baaskiillada korantada, iyo baytariyada gawaarida, bada, duulista, mashiinada iyo warshadaha kale sidoo kale si ballaaran loo isticmaalay qaar heer sare ah oo casriyeysan alaabada, sida duubista fiidiyowga, koobiyeyaasha, kaamerada, taleefanka mobilada, aaladda mashiinka saxda ah, xisaabaadka lacagta bangiga, iyo mashiinada xirmada baakadaha.
Eeg Dhammaan Mashruuca
Kooxda hal-abuurka farsamada ee aadka u wanaagsan nolosha kaliya uma keeni karto nolosha, laakiin waxay sidoo kale horseedi kartaa horumarka degdegga ah ee warshadaha iyo warshadaha. Shirkadda waxay leedahay koox ganacsato ah oo ka kooban shaqaale aqoon sare leh oo aqoon sare leh, waxay urursatay waayo-aragnimo shaqo hodan ah, waxayna sameysay nidaam maareyn saynis ah. Xubnaha kooxdu waa da 'yartahay oo ay ka buuxaan xoog, hal-abuur cusub iyo geesinimo leh si ay ula kulmaan caqabadaha. Aniga oo leh dareen wanaagsan oo mas'uuliyad bulsho leh, waxaan jeclaan lahaa inaan gacan ka geysto wanaajinta heerka ay ku sugan tahay Shiinaha Korantada.
Waxaan nahay shirkad soo saareysa alaabada taxanaha ah ee Siemens. Shirkadda waxaa la aasaasay 1995, ka dib sannado badan oo horumar ah, shirkadda waxay ku guuleysatay aaminaadda macmiil badan oo waaweyn oo joogto ah iyada oo loo marayo alaabo tayo sare leh iyo adeegyo aad u wanaagsan. Ku qanacsanaanta macaamiisheena ee alaabadayada ayaa ah isha ugu weyn ee awooda, ilaha macaamiisha go'an sidoo kale waxay muujineysaa isku hallaynta alaabooyinka. Sannado badan oo waayo-aragnimo wax soo saar ah ayaa ah in lagu siiyo alaabooyin wanaagsan.
Amarka TiradaMid ka mid ah PiecelabaSaddex qayboodDhamaan tiradawaa la aqbali karaa.
Waxaan aqbalnaa dhamaan tirada xitaa hal gabal oo aan kuu soo diri laheyn. Waxaa jira keyd badan oo noocyadan ah noocyadan ku yaal bakhaarkeenna oo hal ama laba qaybood aan dhibaato nagu ahayn. Courser, tirada badan, qiimaha ugu fiican. Waxaan soo jeedinaynaa in la dalbado sida ugu macquulsan.
Bixintu waxay noqon kartaa Wareejinta Taleefishinka ama Paypal Ama kaarka deynta ama xitaa Alipay. Waxaan khibrad dheer u leenahay 30 sano oo ku saabsan ganacsiga caalamiga ah iyo bixinta badan oo aan aqbali karno. Waxaan kuu soo diri doonaa akoonadayada mar aad go aansato qaabkee noo bixin doona.
Dariiqa gudbintu waa qaabab kala duwan sida xagga hawada, ama bada ama albaab ilaa albaabka adeegaha. Marka la eego tiro yar, waxaan soo jeedineynaa in lagu diro hawo ama dirxiye sababta oo ah wakiilada xamuulka badaha badda ma jecla xamuul yaryar oo ka badan 100kg hoose. Sidookale, waqtiga gaadiidku wuxuu kuxiranyahay habka aad dooratay waxaan kusiineynaa xoogaa talo ah markaad haysatid amarada booska.
Waxaan nahay mid ka mid ah wakiilo badan oo loogu talagalay noocyada caanka ah ee adduunka ku yaal Shiinaha waxaanan dammaanad ka qaadaynaa dhammaan qaybahaas calaamadda ah ee aan iibinayno inay yihiin kuwo dhab ah. Qaybaha waxaa ku jira lambar QR oo waxaad ka hubin kartaa bogga rasmiga ah ee magacyada.
Ku Soo Dhawow Si Aad Noo Weydiiso.